Indlu yanamhlanje enedama, ejikelezwe yindalo
Sertã , Sertã, Portugal
Njengoko kubonwe kwiChannel 4 "Ubomi obutsha kwiLanga" Series 6, iZiqendu 16, 17 kunye ne-18.
Ifumaneka unyaka wonke, iCasa dos Cavalos yindlu yebhedi e-Detached 2 enedama lokuqubha kunye nesihlomelo esivalelweyo. Ibekwe kwiihektare ezi-2.5 zemithi yomnquma, imithi yeziqhamo kunye nehlathi, indawo enoxolo kakhulu engqongwe yindalo.
I-Sertã lilitye elifihliweyo kumbindi wePortugal, ebekwe phakathi kweentlambo zomlambo, iinduli eziqengqelekayo, amahlathi kunye neelali ezintle.
Ubhalisiwe Alojamento AL reg no 94467/AL
ICasa dos Cavalos yindlwana ephucukileyo enenkqubo yokufudumeza kwelog kunye nazo zonke izinto onokuzilindela, i-tv, i-wifi yasimahla, i-microwave, i-cooker, ifriji-ifriji, i-dishwasher, umatshini wokuhlamba, i-BBQ yegesi. Indlu enkulu ithatha abantu aba-4 kumagumbi okulala ayi-2 anamagumbi okuhlambela ayi-2, igumbi lokuphumla kunye nekhitshi / isidlo sangokuhlwa. Kukwakho nenketho yokurenta iSihlomelo, esilungele ukuya kuthi ga kwi-2 abantu, equlathe igumbi lokulala eli-1 kunye negumbi lokuhlambela nge-euro eyongezelelweyo engama-20 ngobusuku. IsiHlomelo sifumaneka kuphela ukuba sirente njengokongeza kwindlu enkulu. Ibhedi kunye nesitulo esiphezulu ziyafumaneka xa uceliwe. Indawo yokuphumla inomgangatho wamatye wesiPhuthukezi kunye nomlilo welogi, iingcango zepatio ezisongayo zikhokelela kwi-pergola enomthunzi kunye netafile yokutyela kunye neendawo zokupheka zangaphandle kwaye zijonge kwindawo yokuqubha, iSihlomelo kunye neepaddocks. Idama elikhazimlayo (elakhiwe ngaphakathi kwesangqa esidala sokubhula) ukuze usetyenziswe nguwe kuphela, likwindawo ethandekayo enelanga ngasemva, liyacocwa kwaye lijongwe yonke imihla. Kukho izinyuko zekona ezikhokelela kwisiphelo esingekho nzulu kunye nenye iseti yamanyathelo kwinqanaba elinzulu. Ubunzulu bedama buyi-1.0m kowona manzi angekho nzulu kunye ne-1.5m kubunzulu balo, ubushushu bamanzi ehlotyeni bumalunga ne-27°c. I-pergola kunye ne-patios zixhotyiswe ngeendawo zokuhlala zelanga, itafile kunye nezitulo kunye ne-BBQ yegesi kunye nezitshisi zokuhlala ngaphandle. Umva wepropathi ujikelezwe zii-oki ze-cork, ii-elm oak kunye nemithi yepine. Uya kujikelezwa yindalo, iintaka, iibele, iinkuni, ii-nuthatches, i-siskins, i-squirrels kunye nezinye iintaka ezininzi, kukho iibhafu zeentaka kunye ne-feeders ukubakhuthaza ukuba bangene egadini. Ihlathi elincinane likwazele zizilwanyana zasendle. Amadlelo ama-2 athe tyaba kwaye azaliswe yimithi yomnquma neziqhamo, efana neorenji, ilamuni, icherry, ikhiwane, iplam kunye nemidiliya yomdiliya wamkelekile ukuba uzincede ukuba isiqhamo sele sikulungele ukutyiwa.
Ubuncinci bokuhlala ubusuku obu-3, naziphi na iindwendwe ezihlala ixesha elide kunobusuku obu-7 ziya kufumana iibhedi ezintsha kunye neetawuli ngeveki.
Ixesha lokuphuma ngu 10am. Ukungena kuvela ngentsimbi yesi-3pm, nangona siya kuzama ukuba bhetyebhetye kangangoko xa siceliwe.
I-Sertã yidolophu entle kakhulu, ephithizelayo yentengiso esezindulini. Inentaphane yeevenkile, iivenkile ezinkulu, iiresityu, iibhari kunye neekhefi. Ungonwabela iglasi yewayini okanye isidlo sakho esijonge umlambo oqukuqela edolophini. Iwayini yasekuhlaleni, utywala kunye nokutya kunexabiso elihle, intsha kwaye ifumaneka ekuhlaleni. Ineziko labakhenkethi, iikhemisti ezinoosokhemesti abathetha isiNgesi, ithala leencwadi elinecandelo lesiNgesi nokufikelela kwi-intanethi kunye neziko lezemidlalo eliqhayisa ngamadama okuqubha angaphakathi nangaphandle. Kukwakho nomboniso bhanyabhanya omncinci ohlaziyiweyo we1930s.
Ukungqonge lo mmandla kukho iilwandle ezininzi ezintle zemilambo, ezingamacandelo omlambo avalelweyo ukuze kuqubhe okukhuselekileyo. Zibonelelwa ngamabhunga, zisebenziseka ngokukhululekileyo kwaye uninzi lwazo ziqulethe izixhobo zokutshintsha, ishawa kunye nezindlu zangasese kunye nendawo yokutyela/icafe/bar. Ngexesha lasehlotyeni kukho iminyhadala emininzi yasekuhlaleni, inkcubeko kunye nokutya/isiselo eSertã nakwiidolophu ezikufutshane. Kukho iimarike zeveki kuzo zonke iidolophu zasekuhlaleni.
We are Alison &Rod, english but live in central Portugal. We have mothers and two sons living in Uk and a daughter with her family living in Australia. We are guests and also hosts with airbnb, we run an Alojamento Local (holiday cottage) in Sertã, Central Portugal.
We are Alison &Rod, english but live in central Portugal. We have mothers and two sons living in Uk and a daughter with her family living in Australia. We are guests and also hosts…
Abamkeli bakho, u-Alison kunye noRod, bahlala kwaye balungisa ipropathi esebumelwaneni. Siyayihlonipha imfihlo yakho, kodwa uya kuhlala usibona sijongana nedama lokuqubha okanye sisebenza kwindawo ekugcinwa kuyo iinqanawa sinyamekela imithi, sicheba ingca njl. .
Sasuka kubomi obuxakekileyo e-UK ukuya kule ndawo intle yaseYurophu ngoJuni 2016 ukuze sonwabele ubomi obuzolileyo, obunempilo kwimozulu engcono. Sinehlombe kakhulu ngedolophu yethu kwaye singathanda ukwabelana ngomdla wethu kunye nezindululo zeendawo zokundwendwela kunye neendawo zokutyela esinokuzama. Suku ngalunye sisamangaliswe bubuhle bendawo engqongileyo, inkcubeko kunye nobuhlobo babantu balapha kwaye iPortugal iye yabhengezwa njengelizwe lesithathu elikhuselekileyo emhlabeni.
Abamkeli bakho, u-Alison kunye noRod, bahlala kwaye balungisa ipropathi esebumelwaneni. Siyayihlonipha imfihlo yakho, kodwa uya kuhlala usibona sijongana nedama lokuqubha okanye si…
Inombolo yomthetho: 94467/AL